SAWIRRO:-Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatey Madaxweyne ku xigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ee Galmudug | Saadaal Media
SAWIRRO:-Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatey Madaxweyne ku xigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ee Galmudug
Nov 1, 2017 - jawaab
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi (Carrabeey) iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ee Galmudug Cali Gacal Casir.
Madaxweyne Farmaajo iyo Masuuliyiinta Galmudug waxaa ay kulankaan ku lafa gureen khilaafka bilihii dambe ka dhex curtay madaxda Galmudug iyo xaaladda guud ee maamulka Galmudug ee uu ugu horeeyo Amniga.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi (Carrabeey) oo aan xiriir la samaynay, waxaa uu warbaahinta Saadaalnews u sheegay in kulankii ay maanta la qaateen Madaxweyne Farmaajo uu iska ahaa kulan xog wareysi ah oo lagu gogol xaarayo kulan dambe oo ay dib ka wada yeelan doonaan.
Ugu dambayntii kulankii ay maanta wada yeesheen Madaxweyne Farmaajo iyo Masuuliyiinta Galmudug wuxuu ku soo idlaaday Jawi ay ku dheehan tahay farxad is afgarad, waxaana ay u ballameen in maalmaha soo socda wada yeeshaan kulan kan ka ballaaran oo looga hadli doono arrimo badan oo dhamaantood ku wajahan danta iyo hurumarinta Galmudug.
DHAGEYSO:-:-Kal-Fadhiga 4aad Ee Aqalka Sare Oo Furmay & Arimaha Looga Hadli Doono
Kalfadhiga 4aad ee Aqalka Sare ayaa si rasmi ah u furmay iyadoo munaasabadda furitaanka ...
MUUQAAL:-Madaxweynaha Somalia oo ku guuleystay heshiisiinta Maliishiyo beeleedyadii Marko ku dagaalamayay
DHAGEYSO:-Taliska CXD Oo War Ka Soo Saaray Weerarkii Deeynuunaay
Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanka Deeynuunaay oo Magalada Baydhabo u jira 26km,waxaana ...